Tobaakada, khamrada, xashiishada - Youmo
Tobak alkohol droger - somaliska
Meniiga hoose waxaad ka heleysaa qoraallo, sawirro iyo filimaan ku saabsan tubaakada, khamriga iyo maandooriyaha.
Qiiqa sigaarka wuxuu qabaa waxyaaba badan oo sun ah. Sigaar cabidda waxey keeni kartaa dhaawacyo iyo cuduro kala duwan. Waxaa laga yaabaa in sigaar aad baratid laakiin waa liiska joojin kartaa.
Khamriga wuxuu ku jiraa cabitaana kala duwan. Dadka intooda badan khamri cabidda waxey u arkaan iney tahay wax fiican ama wey ka helaan. Laakiin khamriga sidoo kale saameyn ayuu ku yeelan karaa jirka, dhibaata ayaana kuu imaani karta haddii wax badan cabtid marar badan.
Qoraalkaan wuxuu ku saabsan yahay dhibaatooyinka khamriga. Haddii aad saaid u cabto ama marar badan aad cabto, iyo haddii khamriga uu noolashaada aad u saameeyo. Waxaad heli kartaa taageero si aad u joojiso khamri cabidda.